SiteKick: Shandura White-Labeled Analytics Kuzivisa kune vako Vatengi | Martech Zone
NeChishanu, Gunyana 4, 2020 NeChishanu, Gunyana 4, 2020 Douglas Karr
Kana iwe urikushandira vatengi vazhinji, kuvaka rondedzero yekutanga kana kusanganisa akawanda masosi mune yedhibhodhi mhinduro kunogona kunge kwakaomarara. SiteKick inokwanisa kubata zvese zvako zvinodzokororwa zvichitaurwa nevhiki, pamwedzi, uye nekota mishumo.
Chirevo chega chega chiri muchimiro chemhando (PowerPoint) uye chinogona kuiswa mucherechedzo, chena-kunyorerwa kune yako agency kana mutengi, uye mhedzisiro inogona kugadziridzwa kana rumwe ruzivo rwunopihwa usati watumira kune wako mutengi.
SiteKick Inopa Aya Anotevera Makomborero
Multi-Source Kuzivisa - Batanidza yako Google, Facebook, uye / kana data reMicrosoft, sarudza maakaunzi aunoda kuudza, wozorega SiteKick iite zvimwe zvese.
Machati Anesimba - SiteKick inogadzira otomatiki machati uye magirafu ayo maviri pamwe netsananguro yakanyorwa yechiteshi chega chega.
Multi-Channel Kubika - SiteKick inoongorora chiteshi chese, ichitsvaga izvo zvinoratidza kukosha kwako: makwikwi makuru, mhedzisiro yeSEO, uye nezvimwe.
Kubvumirana Uye Chiyero - SiteKick inoongorora pese pese poindi yedhata, ichitora izvo zvakakosha zvakawanikwa, uye nekuzviendesa neyakaenderana maitiro uye toni. Bata vamwe vatengi uye rega timu yako itarise pamhedzisiro, kwete zvinyorwa zvekunyora nemaoko.
Campaign uye Zuva Range Kuzivisa - Mepu dzese dzinogona kufananidzwa nenguva yakapfuura kana kune imwecheteyo gore rapfuura kune vatengi vemwaka.
Sitekick Kubatanidzwa uye Dhata Sosi Sanganisira
Google Analytics - Crystal yakajeka, ruzivo rwehunyanzvi paGoogle Analytics. Inotsanangura mafambiro nezve zvikamu zvevatengi, shanduko, zvinangwa, chiteshi mashandiro, uye mapeji ekumhara
Google Ads - Yakachena-yakanyorwa Google Ads kuzivisa iyo inoratidza yako maitiro pakutsvaga, kuratidza, uye vhidhiyo mushandirapamwe. Inodonha mumapoka eshambadziro, mazwi akakosha, mibvunzo, nezvimwe.
Google Search Console - Taura pamusoro pekiyi kiyi masosi, zvisikwa zvekutsvaga zvekutsvaga uye tinya-kuburikidza chiyero, uye akakosha mapeji ekumhara.
Google Bhizinesi Yangu - Yakanyorwa-chena kuti Google Bhizinesi Rangu kushuma iyo inoratidza kukanganisa kwako panhare dzenharaunda dzakagadzirwa, zvikumbiro zvemafambiro ekutyaira, uye ongororo iri kuitiswa nebhizinesi.
Facebook Ads - Yakagadziriswa, yakanyorwa mhinduro paFacebook Ads. Tsanangura zvakajeka fanera, kuita mushandirapamwe, uye kuburitsa pachena nzira dzese dzinoteererwa nevateereri kushambadziro kwevatengi.
Facebook Pages - Facebook Mapeji ekuzivisa ayo anotaurira mutengi kuti vanobatana sei nevateereri vavo. Ratidza kuti vateereri vanoita kangani nezvinyorwa uye dzidza zviri kushanda
Microsoft Ads - Yakachena-yakanyorwa Microsoft Ads inoshuma iyo inoratidza kukanganisa kwako pakutsvaga, kuratidza, uye vhidhiyo mushandirapamwe. Inodonha mumapoka eshambadziro, mazwi akakosha, mibvunzo, nezvimwe.
Mailchimp - Ratidza kuregedza kwako email neyemhando yeMailchimp kushuma. Chera mukati memazuva akanakisa ekutumira, akakwana meseji yenyaya, uye saizi yevateereri.
Emma Email - Ratidza kushanda kwako kweemail neakaomarara Emma kurondedzera. Chera mukati memazuva akanakisa ekutumira, akakwana meseji yenyaya, uye saizi yevateereri.
Google Sheetsiti - Batanidza chero imwe dhata mune yako SiteKick mishumo, otomatiki, uchishandisa yedu nyowani Google Sheets kusangana. Gadzira matafura etsika uye machati mukati chaimo reSiteKick mushumo, pamwe neese edu mamwe ekubatanidzwa.
Tora Gwaro Remahara Izvozvi!
Tags: zvekushandisamutengi achishumaEmma email inoshumafacebook adsgoogle adsgoogle analyticsgoogle bhizinesi rangugoogle yekutsvaga konimailchimp kuzivisamicrosoft adspowerpoint